Mari inowedzera nokukurumidza yedhijitori muna 2022. Dhidhijhi mari yakawanda kwazvo, inobatsira mari yemadhora nekukura kukuru.
Imwe 10 inokura nokukurumidza zvikuru yedhijitari ine mari yakakwirira kukura kwevhiki yapfuura.
Dhijidha mari ine zvakawanda zvingaita
Percentage kukura kwevhiki
ERC20 (ERC20) 303.88 %
PolySwarm (POLYSWARM) 271.35 %
Router Protocol (ROUTE) 217.68 %
Propy (PRO) 215.21 %
ZEON (ZEON) 208.12 %
Newton (NEW) 200.52 %
Alitas (ALT) 142.87 %
Dragonchain (DRGN) 126.45 %
Counos X (CCXX) 91.10 %
Elastos (ELA) 78.79 %
Iyo inokurumidza kukurumidza iyo digital mari ndeye cryptoratesxe.com webhusaiti webhusaiti, iyo inoratidza iyo yepamusoro mari yemadhora nekukurumidza kwakanyanya kuyera muvhiki yekupedzisira.
Iyo "inokurumidza kukurumidza digital mari" webhusaiti online inoshandisa yakavhurika zvinyorwa zvinowanikwa kubva kune digital mari exchanges uye inogadzira chiyero cheiyo inokurumidza kukurumidza mari yemadhora munguva chaiyo.
Iko kukurumidza-kukura digital mari ndeye crypto, maererano neyedu tsananguro, iyo mukati mevhiki inoratidza kukura kwakanyanya mukubudirira, kukura kwehuwandu hwayo. Kugadziridzwa mumutengo hakuna kutorwa kusingatariswe nesu, chete shanduko mukukosha pamusoro pevhiki yekumisikidzwa inoiswa mukufungwa. Iko digital mari yakadaro, sekutonga, inoratidza purofiti yepamusoro, asi kwete inogara yakagadzikana. Njodzi dzekudyara mari inokurumidza kukura dzakwana, asi iyo yakanyanya kudzoka neimwe unit nguva.
Iko kukurumidza-kukura digital mari kwakanakira kupfupi, kusagadzikana Investment.
Kusiyana ne "" sevhisi, iyo inoratidza kukura kwehuwandu muvhiki, Mari yakakurumidza kukura mari sevhisi, pane kudaro, inoratidza crypto neiyo diki uye yakavimbiswa kukura uye kusasimba kuderera.
Iyo chiyero cheiyo inokurumidza kukurumidza mari yemadhora inogara ichirondedzerwa pamhepo, sezvo digital mari exchanges inogara ichitengeswa, uye chiyero che digital mari chiri kungochinja.
Shandisa iyo "inokurumidza kukurumidza crypto" basa pamhepo uye mahara.
Iyo inobatsira kwazvo digital mari ye 2022 ndeye yedu yemahara online webhusaiti webhusaiti iyo inoratidza iyo inonyanya kubhadhara, mumaonero edu, mari yemadhora iwe unogona kukurumidza kuwana.
Isu tinoongorora mhindu yemakristccrenrens nekuchinja kukosha kwemari kana huwandu hwayo hwekutsinhana pamitengo. Isu tinofunga iyo inonyanya kubhadhara crypto mari kuve ndiyo yakaratidza yakanyanya kunaka shanduko mukukosha kwayo munguva yevhiki. Pasina kutora hanya nekugadzikana kwechiyero chayo, tinotarisa chete pamusiyano wekukosha pakutanga kwenguva yenguva uye kumagumo kwayo.
Muenzaniso wemusiyano pamiyero yeinobatsira crypto inoenda pamusoro pemazuva manomwe apfuura. Mutengo uye simba reiyo digital mari exchange rate inoshandura zuva rega rega neawa imwe neimwe. Yedu yepamusoro yepamusoro-soro "inobatsira kwazvo digital mari" chiyero chiri kuchinjawo.
Iko kukurumidza kukurumidza mari yemadhora ye 2022.
Iko kukurumidza kukurumidza mari yemadhora kwe 2022 - isu tinoratidza pane ino peji. Asi kukurumidza-kukura izwi rinoreva kukurumidza. Kufungidzira cheyero yekuchinjana chekodhi ye 2022 yakanyanya kureba. Shandira iyo mari yemadhora inokurumidza kukurumidza ye 2022 inoratidza mari pamwe nekufungidzira kwekukura kwevhiki.
Rondedzero yeinokurumidza kukura mari yemadhora ye 2022 inomiririrwa nemuenzaniso wegumi chema cryptos pakurongedza kurongeka kubva kukurumidza kukurumidza kusvika kune kushoma kukurumidza kukura, mukuburuka kwegadziriro yezvibereko.
Kukura nekukurumidza kunoratidzwa zvakanyanya nekusiyana kwekutanga panguva yekudzidza uye kumagumo. Ndezvipi kudzikama uye mapisi kushanduka kweiyo mari yekuchinjana kwemari iri munzira iyi haina kukosha.
Isu tinoratidza ruzivo pane shanduko mukukohwa kweiyo inokurumidza kukurumidza yemari semari yepasiremu yekukura.
Nzvimbo yemakristani anokurumidza kukurumidza anounzwa svondo rekupedzisira re 2022. Isu hatiteveri kudzikama kweiyi mari mune ino sevhisi.
Shandisa sevhisi yepamusoro yepamusoro inokura ye mari yemadhora ye 2022 pamhepo uye mahara.
Iyo inobatsira kwazvo mari yemadhora.
Iyo inobatsira kwazvo mari yemadhora ndeimwe yezvinhu zvinokurumidza kuisa mari kwenguva pfupi.
Iyo yepamusoro purofiti ye digital mari inobvumira vanofungidzira vanoisa mari kuti vawane mari yakawanda munguva shoma.
Ehezve, njodzi nemipimo yakawandisa zvakare dzakakwira.
Kuisa mari mumubhadharo unobatsira kwazvo ngauitwe nechido chekungogara uchiongorora chiyero uye kuti usapotsa nzvimbo yekubuda kubva mukudyara.
Mitemo yekutengesa crypto kuchinjanisa, pamwe nekushandurana kwese, zvinonzwisisika, uye kana digital mari iri kuwana nekukurumidza kukosha uye kuratidza mari yakanaka, saka inogona zvakare kurasikirwa kukosha nekukurumidza.
Mari yemadhora nekukura kwakanyanya.
Mari yemadhora nekukura kwakanyanya - yakatemwa pane imwe nguva yenguva. Mune yedu yepamhepo digital mari chiyero chekuenzanisa sevhisi nekukura kukuru, isu takasarudza nguva yekukoshesa yevhiki imwe.
Kukura kwakanyanya kwekristin pasvondo, sezvatinozviona, kunoratidza maitiro eiyo digital mari exchange rate pamwe sezvinobvira. Panguva ino, madiki diki akasvinudzwa uye kushandurwa kwezuva nezuva pamwero wekutsinhana zvekare hazvitorerwe pasi.
Ukuru hwekukura kwe crypto mukushandira kwedu ndiyo chiratidzo chevhareji pakati pekudyara kwenguva refu uye vatengesi vezuva nezuva vanochinjana mitambo.
Crypto ine huwandu hwakanyanya hwekukura inogona kuonekwawo mune mamwe masevhisi enzvimbo yedu.
Tafura yeiyo inonyanya kubatsira uye inokurumidza kukurumidza mari yemadhora.
Tafura yeiyo inonyanya kubatsira uye inokurumidza kukurumidza mari yemadhora - inoratidza kuratidza yedu yepamusoro yepamusoro yeinonyanya kubhadhara crypto.
Mune tafura yeiyo inokurumidza kukurumidza crypto iwe uchaona zita reiyo crypto currency uye shanduko yehuwandu hwayo muzana.
Paunotarisa pane imwechete inobatsira kwazvo mari yemadhora mutafura, iwe unozoendeswa kune peji kune ruzivo rwakadzama pamwero wekutsinhana kwemari iyi.
Chati yeinonyanya kubatsira uye inokurumidza kukurumidza mari yemadhora.
Iyo chati yezveinobatsira zvikuru uye inokurumidza kukurumidza mari yemadhora ndechimwe chishandiso chepamhepo chepamhepo chinoratidza chikamu chepamusoro cheiyo inobatsira kwazvo mari yemadhora.
Iyo chati yemari inokurumidza kukura inoratidzira masimba ehuwandu hwepamusoro gumi cryptos ine yepamusoro yekudyara inodzoka zvichienderana nezvatinofungidzira.